Codeynta doorashada Sweden oo bilaabatay | Somaliska
Codeynta doorashada Sweden oo bilaabatay
Cidii doonaysa in ay codkeeda waqti hore sii dhiibato ayaa maanta oo arbaco ah ay furantay codeynta doorashada guud ee Sweden. Doorashada ayaa si rasmi ah u bilaaban doonta 14 September balse qofkii doonayo in uu ka fogaado safka ayaa codkiisa maanta dhiiban karo.
Hay’ada qaabilsan qorsheynta doorashada ee lagu magacaabo Valmyndigheten ayaa kaararka cododka u dirtay dad gaaraya 7.6 milyan oo xaq u leh in ay codeeyaan. Qofkasta kaarkiisa waxaa loogu soo diray boostada. Hay’ada ayaa sidoo kale diyaarisay 3000 oo goobood oo lagu codeyn karo, sida iskuulada, maktabadaha, goobaha tareenada iyo xitaa dukaamada qaarkood.
Codeynta doorashada waxaa ka qeyb qaadan kara dadka ugu yaraan Sweden ku noolaa 3 sano. Dadka haysta dhalashada Sweden ayaa keliya codeyn kara doorashada baarlamaanka, balse kuwa gobolada iyo degmooyinka ayaa dadka oo dhan u furan.
Doorashada ayaa la filayaa in ay noqoto mid xiiso leh, iyadoo xisbiyada mucaaradka ay hogaanka u hayaan aftiyada la ururiyay balse waxaa la filayaa in xulufada dowlada ay kor u soo kacaan.
Cunsuriyiinta, Qaniisiinta iyo Mudaharaadka
asc dhamaan somalia midakale jimcaale su aal ayaan qabaa ku aadan cudeenta bilaabaneeysa maantay oo ah rabacada hur udhaca qofka heesta sharciga wadankaan meeqa ayaa laga rabaa ina oow jooga wadankaan ugu yaraan ?
Adiga 2sano jir maa tahay oo wax aqris bartay….Su’ashaada jawabteda qoraalka aad ka heleesaa si fiican u aqri kkk
uma jeedo usigaa okiyaal ween as u bahanyahy hhhhhh. lakin jimcale walalkis xisbiga fiicn see lugu ogaan kara jawab thanks
August 28, 2014 at 10:23
waxaan rabaa in la fahamsiiyo inaan xisbi u codeeyo ama inaan qof codkayga siiyo teebaa aad u fiican.
waxaa fiican in loo codeeyo xisbiga hada talada haayo ee iskaashatda Alleins kaasoo ah xisbi talada wadanka haayay laga soo bilaabo 2006. Nimaan tali jarin hadaw talsho nimaan tagi jirinaa tago horay loo yiri. Mataanaha Alleinsyaa Macaann Waxaa lehh Modaraat.